Bishop Manhanga Voendeswa kuMatare neVanhu vekwaTande kwaRusape
Va Leonard Chidgadza
Mutungamiri weEvangelical Fellowship of Zimbabwe, Bishop Trevor Manhanga, vanonzi vari kunetsana nemumwe murimi wechichena kwaRusape uyo vari kutorera purazi rake zvaita kuti vanhu vanogara munharaunda inotongwa naMambo Tandi kwaRusape kwakare vavakwirire kumatare.
Vanhyu ava vanoti chivanhu chavo chavanoita papuraizi iri chave kutyorwa naVaManhanga avo vanonzi vari kuda kuvaka chechi mupurazi iri.
Vagari kekwaRusape vari pasi paMambo Tandi vaenda kudare repamusoro reHigh Court muHarare nehuwandu hwavo kuzonzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri naVaPeter Tandi avo vari kuvamirira panyaya inonzi VaManhanga vari kuda kutora purazi reLisbury riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva maRusape kubva kumurungu anonzi Robert Smart.
Gweta riri kumirira VaTandi, Va Leonard Chidgadza, vaudza dare kuti VaManhanga vari kuda kutora purazi reLisbury kuti vavake chechi pamusoro pemarinda ari mupurazi iri.
VaChigadza vanoti vanhu vari pasi paMambo Tandi havasi kufara nokuti purazi riri kuda kutorwa iri ndiro ravanoviga madzishe, pamwe nevamwe vanhu vakakosha vachiti mupurazi umu mune nzvimbo dzinoyera dzinofanirwa kuchengetedzwa pasi pemitemo yenyika inobata tsika nemagariro.
VaChigadza vaudza Studio 7 kuti vakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vaine chikumbiro chekuti VaManhanga pamwe negurukota rinowona nezvekugoverwa kweminda, VaDouglas Mombeshora, VaWilliam Samhungu vanove Ishe Tandi, VaDavid Nyakonda avo vanonzi vakapihwa matsamba ekuti vatore purazi iri pamwe nevebazi rinowona nezvetsika nemagariro kuti vasave nechekuita nepurazi iri kana kutsika papurazi iri kudzamara nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro-soro reConstitutional Court naVaPeter Tandi yanzwikwa.
VaTandi vakaenda kudare reConstitutional Court vachiti kodzero dzavo dzekutevedzera chivanhu chavo dzinotyorwa kana VaManhanga vakakenderera mberi nekutora purazi iri.
Mutongi anga achinzwa nyaya iyi, Amai Loice Matanda Moyo, vati nyaya iyi ichadzoka mudare mangwana apo gweta rIri kumirira VaManhanga, Va Phillip Mutandwa, vachapawo dare divi rawo sezvo vanga vasina kugadzirira nhasi.
Mapepa ari pamberi pedare ari kuratidza kuti VaManhanga vakapihwa tsamba yekuti vagare papurazi apa naVaMombeshora.
Mapepa aya anoratidzawo zvakare kuti vagari vekwaTandi havasi kuda kuti VaSmart vabve papurazi ravo sezvo vachinzi vari kubatsira vagari ava nezvose zvavanoda kuita pachivanhu chavo panguva yavanenge vachiteura kuvadzimu nemadzitateguru avo panzvimbo dzinonzi dzinoyera idzi dziri papurazi raVaSmart.
Nyaya iyi inouyawo apo mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vakatarisirwa kuita musangano nevechidiki vemudunhu reManicaland kwaMutare neChishanu, vakaudza vatsigiri vavo masvondo maviri apfuura kumusangano wakaitirwa kuMarondera kuti varungu vese vakasara mumapurazi vanofanira kubviswa mapurazi aya ogoverwa kune vechidiki veZanu PF pamwe nevamwe vatsigiri vavo vasina minda.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti kutorwa kwakaitwa mapurazi evachena zvechisimba ndiko kwakakonzera kuti hupfumi hwenyika hugwadame.